Ụbọchị My Pet » 7 Eziokwu Banyere Pet Mme
7 Eziokwu Banyere Pet Mme
Owning a Pita bụ n'ezie ndụ mgbanwe. Na maka ndị nile na Pita hụrụ si n'ebe, anyị maara na ị pụrụ n'ezie ịbara na n'okpuru eziokwu asaa.
eziokwu #1: “Pet High”
Pita nwe bụ n'ozuzu ọzọ nwee obi ike n'ihi na ùgwù onwe onye. Anu ulo n'anya unconditionally, -ekele ọṅụ, ma mezuo mkpa nke nabata, -eke a “ịzụ elu”, nke dị ka a Pita nwe, ị maara na mmetụta apụghị-eti.
eziokwu #2: More enwe nchekwube ná ndụ
Mgbe na-eche banyere gị anu ulo, i nwere ike nyere aka, ma ọchị ma na-eche nke ụzọ niile nke ha mere ka ọṅụ n'ime ndu gi. Ọbụna mgbe ugboro bụ ikike, na awa cuddle na play sessions dịtụrụ gị ụbọchị. N'ezie mgbe-eche echiche banyere gị Pita, echiche nke ezighị ileghara anya na positivity ọchị ofụri gị na ahu.
eziokwu #3: Lonely No More
Anu ulo na-enye anyị obi nke na-enye anyị a bara uru dị adị. The ibu ọrụ na àjà chọrọ nke Pita nwe bụ uru ọ nile mgbe anyị na-ahụ ma na-enwe adabere n'ihe ụfọdụ, nonjudgmental nkasi obi ha na-enye.
eziokwu #4: Emeghe Kwupụta Life na Relationships
The “ịzụ elu” na anyị anu ulo-egosi anyị na-eme ka ndị na-adịghị ike adịghị nnọọ ka egwu. N'ihi na anyị maara na n'agbanyeghị ihe merenụ, e nwere yiri ihe dị ndụ adabere n'ebe anyị. site anu ulo’ n'anya ọdịdị na mmetụta ịhụnanya, ezi ndabere anu ulo-egosi anyị na-enye olileanya na ahụ meghee bụ n'ezie ọnụ ahịa ihe ize ndụ ọ bụla.
eziokwu #5: Okwukwe na Mkpụrụ Obi na nwunye
Site random nsutu ka n'apata-ọdụ na-na anya nke nrube dị n'anya ha, onkondishional ịhụnanya anu ulo na-enye na-enye a ọhụrụ pụtara na okwu mkpụrụ obi mate. N'ihi na Pita hụrụ na enthusiasts, anyị anu ulo na otu n'ime mkpụrụ obi anyị na nwunye. site ha “nanị ịma” mgbe anyị chọrọ ụfọdụ mmezi anya na-egosi na mkpụrụ obi unu na-agwa onye ọ bụla ọzọ. Ọ bụ nke a echiche ahụ anyị anu ulo ime ka anyị na-emeghe ma na nwoke a echiche nke mkpụrụ obi na nwunye.
eziokwu #6: Na Touch na uche
ndị mmetụta na, na adịghị enye echiche hysterical ákwá ma ọ bụ mgbe niile na ọnọdụ swings. Anu ulo-enye ndụ anyị a nghọta miri emi site n'ikwe ka anyị na-inwe na aka softer, chiri anya karịa mmetụta uche. Anyị, dị ka Pita nwe, bụ Elezie ejikwu ịnụ ọkụ n'obi na ike na-agwa ibe anyị echiche na mmetụta ọ bụghị nanị na anyị anu ulo ma ndị ọzọ dị ka nke ọma.
eziokwu #7: Anu ulo Onye Ụzọ
Anyị anu ulo na ụmụ anyị. Si na-ekwurịtakarị banyere ha ka ha na-azọpụta ọtụtụ puku Pita foto na-emeso ha ihe dị ka ụmụ ọhụrụ, na mmekọrịta dị n'etiti anyị na anyị anu ulo bụ nnọọ yiri nke a nne na nna na-nwa.
5 Mere Pet nwe na-mmeri Na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị World